China acha igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ Manufacture na Factory | Huaxiao
Agba agba igwe anaghị agba nchara
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere Acha igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ
bilie ọla edo anaghị agba nchara,
ọla edo anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ,
kọfị gold anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ,
sliver igwe anaghị agba nchara,
mmanya na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie,
ọla kọpa igwe anaghị agba nchara,
green ọla kọpa igwe anaghị agba nchara,
odo odo anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ,
akwa igwe anaghị agba nchara,
acha anụnụ anụnụ anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ,
Champagne anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ,
titanium ntekwasa igwe anaghị agba nchara,
Ti Agba agba nchara
Mfe nkọwa banyere agba agba igwe anaghị agba nchara
Uru nke agba igwe anaghị agba nchara
Agba ya dị maka ọla edo dị ọcha, odo, odo odo, sapphire acha anụnụ anụnụ, egbe na-akwadoghị, agba, agba aja aja, agba agba, ọla edo zirconium, ọla kọpa, pink, champeenu na ọtụtụ ihe eji achọ igwe anaghị agba nchara na agba ndị ọzọ. Agba igwe anaghị agba nchara ji achọ mpempe akwụkwọ nwere uru nke ike corrosion eguzogide, elu n'ibu Njirimara; agba agba agbatịwo ma ọ dịghị adalata, agba na-agbanwe na n'akuku nke ụda olu, wdg. Ọzọkwa, agba elu oyi akwa nke igwe anaghị agba nchara ji achọ mpempe akwụkwọ bụ okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ 200 "'na nnu ya na ịgba corrosion eguzogide ka mma karịa nkịtị igwe anaghị agba nchara, ihe ọma na-eyi ndị na-eguzogide ma ọkọ arụmọrụ bụ Ẹkot na arụmọrụ nke foil oyi akwa ntekwasa na gold.
Okwu mmalite nke nhazi agba maka mpempe akwụkwọ nchara
Usoro imepụta nke igwe anaghị agba nchara abụghị naanị akwa akwa nke ndị ọrụ agba n’elu igwe anaghị agba nchara, nke nwere ike mepụta agba dị mma ma dị egwu, mana a na-enweta ya site na usoro dị mgbagwoju anya. Ka ọ dị ugbu a, usoro eji eme ihe bụ acid batation oxidation, na-ewepụta akwa transperent nke ihe nkiri chromium oxide dị na igwe anaghị agba nchara, nke ga-ewepụta agba dị iche iche n'ihi oke ihe nkiri dị iche iche mgbe ọkụ na-enwu n'elu. Nhazi agba maka igwe anaghị agba nchara gụnyere shading na dura mater ọgwụgwọ usoro abụọ. A na-eme ndò ahụ na chrom sulfuric acid na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ mgbe igwe anaghị agba nchara mikpuru; ọ ga-emepụta akwa nke ihe nkiri oxide n'elu nke onye dayameta bụ naanị otu pasent-nke ntutu. Ka oge na-aga na ọkpụrụkpụ ahụ na-abawanye, agba nke igwe anaghị agba nchara ga-agbanwe mgbe niile. Mgbe ọkpụrụkpụ ihe nkiri oxide sitere na 0.2 microns ruo 0.45 m, agba nke igwe anaghị agba nchara ga-egosi acha anụnụ anụnụ, ọla edo, ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Site na ịchịkwa oge ị ga-eri, ị nwere ike nweta eriri igwe anaghị agba nchara. Mgbe nhazi subdural, cathode, chromium oxide, na ogige ndị ọzọ nwere ike ịmepụta. Ọ bụghị naanị na ọ na-ejuputa obere pores na ihe nkiri oxide kamakwa ọ na-eme ka njigide ahụ na-eyi, mmebi ahụ na ikpo ọkụ nke ihe nkiri oxide, na-eme ka arụmọrụ nke ihe a kawanye mma.
A na-eji akwa igwe anaghị agba nchara n'ọtụtụ ebe.
Nrụgide nke corrosion na-eyi nkwụsi ike maka agba igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ ngwaahịa siri ike karịa igwe anaghị agba nchara, nke nwere ike iguzogide ihe karịrị afọ iri nke nnu na-eme ka nnu na ihe na-achagharị agba maka ihe karịrị afọ 30 na irradiation UV. Isi ahu na - ejikọ ya na akwa agba, na - ejigide ihe eji arụ ọrụ na arụmọrụ nke igwe anaghị agba nchara, nke nwere ike ịhazi usoro nhazi na ịgbatị. A na-egosipụta agba agba site na agba na-enwu gbaa, dị nro, siri ike, mara mma, yana uru ndị ọzọ. Agba igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ na-ebe etinyere na ọtụtụ ubi, nke ike-eji na igwe mbuli, ngwaike na ụlọ ngwa, kichin ngwa, kabinet, ụkpụrụ ụlọ mma, mgbasa ozi ihe ịrịba ama na-adị kwa ụbọchị mkpa, wdg Uru nke ngwaahịa na-ukwuu mma, nke nwere uru ahia ahia di oke ahia.
Nke gara aga: gosị igwe anaghị agba nchara
Osote: embossed igwe anaghị agba nchara
Acha igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Ngwongwo Nchara Agba ọla edo